စိတ်ထားကောင်းလွန်းသူတွေ အမြဲလိုလိုကျူးလွန်မိတတ်တဲ့ အမှား(၅)မျိုး - Tameelay
စိတ်ထားကောင်းလွန်းသူတွေ အမြဲလိုလိုကျူးလွန်မိတတ်တဲ့ အမှား(၅)မျိုး
June 4, 2020 by PP
လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့၊ ပညာတတ်ဖို့ဆိုတာတွေထက် စိတ်ရင်းကောင်းဖို့က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပဲတော်တော် စိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုရင် သုံးစားလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က စိတ်ထားကောင်းလွန်းပြန်ရင်လည်း ထင်မှတ်မထားတဲ့အမှားလေးတွေကို လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းလွန်းသူတွေ အမြဲလိုလိုလုပ်မိတတ်တဲ့အမှားတွေကတော့ ….
ကိုယ့်အပေါ်အမှားလုပ်တဲ့သူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ လို့ လူတွေက အကြံပေးကြပေမယ့် အဲ့ဒီလူက ကိုယ့်ရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ထိုက်တန်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ခွင့်လွှတ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ နောက်ထပ်အမှားတွေ ထပ်ထပ်ပြီးကျူးလွန်အောင် အခွင့်အရေးပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် အမှားကျူးလွန်တဲ့သူကို အမှားနဲ့တန်တဲ့အပြစ်ပေးရပါမယ်။ အမြဲတမ်း စိတ်ကောင်းထားပြီး ခွင့်လွှတ်နေလို့မရပါဘူး။
နေရာတကာမှာ နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက်ထောင်ပြနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းလည်း သည်းခံနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာကိုထိခိုက်တာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုကိုစော်ကားတာ၊ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ တမင်တကာနှိမ့်ချတာတွေကို ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ငြိမ်ခံမနေသင့်ပါဘူး။ နေရာတကာ စိတ်ထားကောင်းမွန်မြင့်မြတ်နေဖို့မလိုပါဘူး။
(၃) အကူအညီလာတောင်းတိုင်း မငြင်းတတ်တာ
အားနာတတ်တာကလည်း စိတ်ထားကောင်းသူတွေရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုပါပဲ။ကူညီတတ်တာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနာတတ်လွန်းပြီး အကူအညီလာတောင်းတိုင်းမငြင်းဘဲ၊ ကိုယ်အဆင်မပြေတာကို ဖွင့်မပြောဘဲ သူများအခက်အခဲကို ကိုယ့်အခက်အခဲအဖြစ်ခံပြီး ကူညီတာကတော့ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာတာပါပဲ။
လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံး၊ အရာအားလုံးထက် ဦးစားပေးဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက် သူများကို ဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ တခြားသူတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဦးစားပေးတာက မဖြစ်သင့်ဘူး၊ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရတာပါ။ ဒီလိုစိတ်မျိုးက ကိုယ့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
(၅) ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲသံသယဝင်နေတာ
စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေအမြဲကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုက ကိုယ်ကသူများအပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း လုံလောက်တယ်လို့ မထင်တာပါ။ ကိုယ်က လူတစ်ဖက်သားအပေါ်တကယ်ကောင်းရဲ့လား၊ သူ့အပေါ် မကောင်းတဲ့စိတ်၊ မနာလိုစိတ် များဖြစ်နေမိပြီလား၊ စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဝင်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်တာပါ။ စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ အဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်လုပ်သမျှ၊ ကိုယ်ဖြစ်သမျှ အားလုံးက သူများအပြစ်လို့ထင်ပြီး ကိုယ့်အမှားအတွက် တခြားသူကို အပြစ်တင်တတ်ပါသေးတယ်။
လူတဈယောကျဟာ ဘဝမှာအောငျမွငျဖို့၊ ပညာတတျဖို့ဆိုတာတှထေကျ စိတျရငျးကောငျးဖို့က အရေးကွီးဆုံးဖွဈပါတယျ။ လူတဈယောကျက ဘယျလောကျပဲတျောတျော စိတျထားမကောငျးဘူးဆိုရငျ သုံးစားလို့မရပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူတဈယောကျက စိတျထားကောငျးလှနျးပွနျရငျလညျး ထငျမှတျမထားတဲ့အမှားလေးတှကေို လုပျမိတတျပါတယျ။ စိတျထားကောငျးလှနျးသူတှေ အမွဲလိုလိုလုပျမိတတျတဲ့အမှားတှကေတော့ ….
ကိုယျ့အပျေါအမှားလုပျတဲ့သူကို ခှငျ့လှတျလိုကျပါ လို့ လူတှကေ အကွံပေးကွပမေယျ့ အဲ့ဒီလူက ကိုယျ့ရဲ့ခှငျ့လှတျမှုနဲ့ထိုကျတနျဖို့လညျး လိုပါသေးတယျ။ ခှငျ့လှတျဖို့မထိုကျတနျတဲ့သူကို ခှငျ့လှတျလိုကျတဲ့အခါ နောကျထပျအမှားတှေ ထပျထပျပွီးကြူးလှနျအောငျ အခှငျ့အရေးပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အမှားကြူးလှနျတဲ့သူကို အမှားနဲ့တနျတဲ့အပွဈပေးရပါမယျ။ အမွဲတမျး စိတျကောငျးထားပွီး ခှငျ့လှတျနလေို့မရပါဘူး။
နရောတကာမှာ နဂါးမှနျးသိအောငျ အမောကျထောငျပွနစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျးလညျး သညျးခံနစေရာမလိုပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့သိက်ခာကိုထိခိုကျတာ၊ ကိုယျ့ရဲ့ မိသားစုကိုစျောကားတာ၊ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျအကိုငျနဲ့ပတျသကျလို့ တမငျတကာနှိမျ့ခတြာတှကေို ပါးစပျပိတျပွီး ငွိမျခံမနသေငျ့ပါဘူး။ နရောတကာ စိတျထားကောငျးမှနျမွငျ့မွတျနဖေို့မလိုပါဘူး။
(၃) အကူအညီလာတောငျးတိုငျး မငွငျးတတျတာ
အားနာတတျတာကလညျး စိတျထားကောငျးသူတှရေဲ့ အားနညျးခကျြတဈခုပါပဲ။ကူညီတတျတာကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အားနာတတျလှနျးပွီး အကူအညီလာတောငျးတိုငျးမငွငျးဘဲ၊ ကိုယျအဆငျမပွတောကို ဖှငျ့မပွောဘဲ သူမြားအခကျအခဲကို ကိုယျ့အခကျအခဲအဖွဈခံပွီး ကူညီတာကတော့ ကိုယျ့ဒုက်ခကိုယျရှာတာပါပဲ။
လူတိုငျးက ကိုယျ့ကိုယျကိုအခဈြဆုံး၊ အရာအားလုံးထကျ ဦးစားပေးဆုံးပါ။ ဒါပမေယျ့ စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့ကိုယျကိုထကျ သူမြားကို ဦးစားပေးတတျကွပါတယျ။ တခွားသူတှထေကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုဦးစားပေးတာက မဖွဈသငျ့ဘူး၊ အပွဈရှိတယျလို့ ခံစားနရေတာပါ။ ဒီလိုစိတျမြိုးက ကိုယျ့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုကိုဖွဈစပေါတယျ။
(၅) ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲသံသယဝငျနတော
စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှအေမွဲကွုံတှရေ့တဲ့ပွဿနာတဈခုက ကိုယျကသူမြားအပျေါဘယျလောကျကောငျးကောငျး လုံလောကျတယျလို့ မထငျတာပါ။ ကိုယျက လူတဈဖကျသားအပျေါတကယျကောငျးရဲ့လား၊ သူ့အပျေါ မကောငျးတဲ့စိတျ၊ မနာလိုစိတျ မြားဖွဈနမေိပွီလား၊ စသဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုသံသယဝငျပွီး စိတျမကောငျးဖွဈနတေတျတာပါ။ စိတျထားမကောငျးတဲ့သူတှကေတော့ အဲ့လိုစိတျမြိုးဖွဈဖို့နနေသောသာ ကိုယျလုပျသမြှ၊ ကိုယျဖွဈသမြှ အားလုံးက သူမြားအပွဈလို့ထငျပွီး ကိုယျ့အမှားအတှကျ တခွားသူကို အပွဈတငျတတျပါသေးတယျ။
Categories General Knowledge Tags 04, pp Post navigation
ပညာရှိလို့ မာနျမာနတှေ ပိုတကျသှားတယျ ဆိုတာ လုံလောကျအောငျ ပညာမရှိလို့ပဲလို့ မှတျရမယျ။
ဖားအောကျတောရဆရာတျောကွီး မိနျ့တဲ့ အိမျတဈအိမျမှာ စီးပှားရေးတှပွေလေညျနရေတဲ့ အကွောငျးအရငျး